တရုတ် PET ကြိုးချည်မျှင်လုပ်စက် စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ | Zhuoya
PET ကြိုးချည်မျှင်ပြုလုပ်သည့်စက်သည် ဤနယ်ပယ်တွင် နည်းပညာအသစ်ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသော အချင်းများ၊ အရောင်များ စသည်တို့၏ အသေးစိတ်လိုအပ်ချက်အရ ချည်မျှင်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ PET ကြိုးချည်မျှင်ထုတ်စက်လိုင်းသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် နည်းပညာဒီဇိုင်း၊ ရင့်ကျက်သော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ချည်မျှင်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှထုတ်လုပ်သော PET ကြိုးချည်မျှင်များသည် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်း၊ ခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားခြင်း၊ ပွန်းပဲ့ခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ပျော့ပျောင်းကောင်းမွန်ခြင်း၊ တောက်ပသောအရောင်အသွေး၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤချည်မျှင်မှပြုလုပ်သော PET ကြိုးသည် အခြားပစ္စည်းကြိုးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုထားသည်။ ၎င်း၏ ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးခြင်းကြောင့် PET ကြိုးသည် စျေးကွက်တွင် လုံးဝ အားသာချက်ရှိသည်။
1. ဤနယ်ပယ်တွင် ထိပ်တန်းရာထူး
3. ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ထူးခြားပြီး ရင့်ကျက်သောနည်းပညာပံ့ပိုးမှု
ယခင်- အရည်အသွေးကောင်း တရုတ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်/PP ဆောက်လုပ်ရေး အကာအကွယ် ပိုက်ကွန် ဝါယာကြိုး ချည်မျှင်ထည့်သည့် စက်
နောက်တစ်ခု: China Good Pet Broom Monofilament Extruding Machine Manufacturer အတွက် PriceList